सेरोफेरो : हामी सबै डाक्टर केसी !
हामी सबै डाक्टर केसी !
भाद्र १८, २०७२- डाक्टर गोविन्द केसीको पाँचौं पटकको अनशन । भेट्न र समर्थन जनाउन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुग्दा त्यहाँ शिवरात्रीको पशुपतिझै उनलाई भेट्नेको भीड थियो । अस्पतालको एक कुनामा लडिरहेका थिए उनी । पशुपतिका देवता त फूल, प्रसाद र दक्षिणाले टन्न अघाएका हुन्थे । तर यहाँ भने उनी भोका र बिरामी थिए ।
देशका सरकार र ठूला मान्छेहरु सानाको कुरा सुन्दैनन् । यसैले आन्दोलन हुन्छन् । तर, केसीका यति धेरै तिखो कान छ कि कर्णालीको बिरामीको पीडा उनी सुन्छन् ।
जाजरकोटका गाविस पिच्छेको व्यथा महसुस गर्छन् । पहाड हल्लिँदा उनको मन हल्लिन्छ र पहाडका भत्केका भग्नावशेषतिर पुग्छ ।
तराई डुब्दा मलम लगाउन उतै पुग्छन् । गरिबको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने वनमाराझैं सल्केका मेडिकल कलेजभित्रको दलीय राजनीतिको पनि हेक्का राख्छन् ।
अनशनमा उनी बस्दा, उनको भोकले धेरै भोकाहरूको प्रतिनिधित्व गरेको थियो । उनलाई गाल्दै गएको रोगमा देशलाई ढाल्दै गएको माफियातन्त्रको छायाँ देखिन्थ्यो । ठूलो बिडम्बना, यहाँ रोग, शोक र भोकको सुनुवाई हुँदैन । हुन्छ त केबल हिंसा, तोडफोड अनि तोडमोडको । तैपनि उनको अभियान जारी थियो ।
आखिरीमा सरकारसँगको ११ बुँदे सहमतिपछि बसेको बाह्रौं दिनको दिन उनले आफ्नो पाँचौं अनशन तोडे । त्यतिबेला शिक्षण अस्पतालअघि जुत्ता मर्मतको काम गर्ने सत्यनारायण राम र अस्पतालका बिरामी १० वर्षे बालक सुवास अधिकारीका हातबाट उनले जुस पिएका थिए । जुश पिलाउने यी दुई पात्रको उपस्थितिले पनि गहिरो अर्थ दिइरहेको थियो ।
गत चैत्र १९ गते सरकारसँग भएको त्यो सहमतिको पहिलो बुँद्धामै माथेमा प्रतिवेदन बमोजिम नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन नदिने र बिस्तार गर्ने कुनै पनि काम नगर्ने उल्लेख छ । तर, सरकार आफैंले गरेको सहमतिविपरित गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै आशयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिदियो ।
सच्चा जनता माथिको कच्चा राजनीतिको यो एउटा यस्तो घिनाउँदो उदाहरण हो जसले तपाई हामीलाई आत्मैदेखि हल्लाइदिएको छ । क्रोधित बनाएको छ । तर के बुझ्नु पर्छ भन्दा, लामखुट्टेले टोक्न सकेन भने उसको अस्तित्व खतरामा पर्छ । यो उनीहरूको विशेषता हो । माफियाको खेल भनेकै भइरहेको संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने अनि त्यसमा राजनीति गर्ने हो । यस विरुद्ध हाम्रो प्रतिकार निरन्तर भइरहेको छ र रहिरहनु पर्छ ।
यस्तो चरम भ्रष्टाचारको दलदलबीचमा तिनको धनुषको ताँदो चुँड्याउने गरि अनशन बस्ने केसीको सत्कर्मले हामीमा धेरै प्रश्न सोझ्याएको छ । ‘तपाई कसका लागि बाँच्दै हुनुहुन्छ ?’ धेरै प्रश्नहरू बीचको धारिलो प्रश्न हो यो । ऐना अघि उभिएर हेर्दा तपाईलाई पनि यही प्रश्नले घोच्न सक्छ, साँच्चै म कसको लागि बाँचिरहेको छु ? आफ्नै लागि वा अरु धेरैका लागि ?
अरु धेरैका लागि हो भने ठीक छ । तर आफ्नै लागिमात्र बाँचेको हो भने त्यो पक्कै पनि पर्याप्त छैन । किनकि मलाई यहाँ शान्तिसँग जीवन जिउन कसैले मेरा लागि असल राजनीति गरिदिनु पर्छ । भ्रष्टाचार रोक्दिन पर्छ । भत्केका संरचना बनाउन । बन्दको बिरोध गर्न । बिजुली, पानी, बत्ति, यातायात, यो, उ ठिक्क पार्दिनका लागि पनि मेरो निम्ति अरु कोही बाँच्दिनु पर्छ । के मेरो लागि कोही बाँचिरहेको छ त ? के तपाइका लागि कोही बाँचेको छ ?
के बिरामी परेर लडिरहेको यो समाजलाई उठाउन एउटै डाक्टर केसीमात्र सक्लान् ? यसमा हाम्रो योगदान के ? भुलेर पनि यस्तो नहोस् कि जीवनभर हाम्रा आँखाहरूले शहिदमात्र खोजि रहुन्, ‘कोही हाम्रो लागि मरिदियोस् र उसका कारणले हामी धेरै वर्षसम्म बाँच्न पाउँ ।’
भवसागर घिमिरे, http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-09-04/20150904133554.html